Amnesty oo Farmaajo ka dalbatay in aanu dhaqan-gelin xeerka Saxaafadda | KEYDMEDIA ONLINE
Amnesty oo Farmaajo ka dalbatay in aanu dhaqan-gelin xeerka Saxaafadda
Hay'adda Amnesty International oo walaac ka muujisay hadal dhawaan ka soo yeeray Madaxweyne Farmaajo, ayaa isla Madaxweynaha ugu baaqday in aanu dhaqan-gelin xeerka cusub ee Saxaafadda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hay'adda xuquuqul insaanka Caalamiga ah ee Amnesty International ayaa Madaxweyne Farmaajo ka dalbatay in uu dhaqan gelin xeerka Saxaafadda ay dhawaan ansixyeen labada Aqal ee Baarlamaanka, madaxweynahana saxiixay.
Qoraal ka soo baxay guddiga badbaadinta Suxufiyiinta ee Amnesty ayaa lagu sheegay in ay wel-weli ka qabaan dhaqan-galka xerkaan oo la sheegay in uu qatar ku yahay wariyeyaasha Soomaaliyeed.
“Anaga oo ku hadleeyna magaca Hayadda Amnesty International, Guddiga Badbaadinta Suxufiyiinta, waxaan kula wadaageeynaa welwelka la xiriira wax ka beddelka sharciga Saxaafadda ee aad saxiixday in la dhaqan geliyo waayo waa mid dhibaato ku ah Saxafiyiinta Soomaaliyeed” ayaa lagu yiri qoraalka.
Sidoo kale Qoraalka ayaa lagu sheegay in Ururada Saxaafadda Soomaaliya ka shaqeeya ay diiwaan geliyeen xannibaadyo badan ay saartay dowladda Soomaaliya warbaahinta madaxa banaan, islamarkaana la dagaalantay xorruyatul hadalka.
Qoraalka Hay’adda Amnesty International oo aad u dheer ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in balan qaadka dowladda ee ah in warbixin xor ah oo madaxbanaan ay si gaar ah muhiim u tahay. Abuuritaanka jawi ku habboon sharciga iyo amniga warbaahinta waa u baahan tahay tallaabooyin muhiim ah.
“Waxaan qireynaa talaabooyinka ay dowladaadu qaaday ilaa iyo hadda si loo wanaajiyo xuriyada saxaafada loona ixtiraamo xuquuqda xorriyatul qowlka ee dalka, gaar ahaan balanqaadkii aad muujisay May 3, 2020 ee dib u eegista aad Madaxweyne ku sameyneyso xeerka ciqaabta ayaa lagu yiri” Warbixinta Amnesty.
Dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyene Farmaajo ayaa Dagaal adag ku hayaSaxaafadda tan iyo markii uu talada dalka la wareegay, waxaana xusid mudan in wariyeyaal badan ay dalka isaga hayaameen kadib tacadiyo loo geystay.